ITIL iyo shahaadada PMP? Waa kuwee sax kuu ah? - ITS Tech School
ITIL iyo shahaadada PMP? Waa kuwee sax kuu ah?
ITIL Vs Certification PMP
Labada Shahaadada PMP (Maareynta Maareynta Mashruuca) iyo Shahaadada ITIL (Maktabadda Macluumaadka Kumbuyuutarka Macluumaadka) waa xulashooyin caan ah. Shahaadad kastana waxay awood u leedahay inay kuu soo degto shaqo sare oo leh mushahar aad u sareeya.
Sidee ayaan ku bilaabi karnaa faa'iidooyinka shahaadada PMP. Marka aad bilowdo socodka xirfada saxda ah ee saxda ah, waxay qaadataa qulqul weyn iyo hubin.
Noqoshada, haddii ay suuragal tahay, inaad ka soo baxdo koorsada saxda ah waxay horay u sii caawin kartaa hal horudhac, waxaad u maleyn kartaa tan markii shahaadada PMP ay noqoto mid muhiim u ah waxna ka dhigaysa waxyar ka yar adoo doonaya inaad ka fekerto. A run ee PMP waxay kobcisaa maareynta maareynta mashruuca oo saameyn ku yeelata inaad haysato tiro badan oo karti badan leh oo ku saabsan maaraynta yaryar iyo daryeelka mashaariicda. Ka baara faa'iidooyinka ugu fiican ee aad ku helaysid qalabaynta shahaadada PMP.
Horumarinta Kobaca Shaqadaada
Kooraska shahaadada PMP waa shaqo guud oo la aqoonsan yahay, waxaana loo arkaa kooxda guud ee caalamiga ah. Qeybta IT-da, guryaha shirkadaha badankood waxay kuxiran yihiin kormeerayaasha ballan-qaadka ah ee PMP taasina waxay si dhab ah u hagaajin kartaa xaddiga shaqo-helitaan ka sareeya inta aad ka rajeyneysay.
Qof kasta oo ka mid ah dunida ganacsigu si buuxda uma ogaan karo faa'iidooyinka maamulka nidaamka iyo sida ay u hagaajinayso faa'iidooyinka hawsha. Markaad noqoto PMP xirfadle uquruxsan, waxaad leedahay ficil ahaan inaad isku xirto shakhsiyadii koorasyada sameeya iyo kuwa la aqoonsaday oo la aqoonsaday PMP. Tani waxay si toos ah u cusbooneysiineysaa xayeeysiintaada iyo calaamadeyntaada shaqo ahaan khabiir ahaan inta aad ku siineyso fursad aad ku qaadato tallaal heer sare ah oo aad kala dooran karto.
Hagaajinta Heerka Xirfadda
Ma aha mid u fudud sida uu u dhawaaqo si loo qaado kartida iyo wixii la mid ah waa inaad la kulantaa si taxadar leh. Waxaa sidoo kale jira tayada shaqada oo la xiriirta shuruudaha shaqada koorsada. Waxaad heleysaa fursad aad ku diyaargarowdid oo aad iskugu duubto oo aad u badan Maamulka mashruuca qaabeynta. Kala soocida nidaamkan ayaa ku jira
Sidaa awgeed, waxaad helaysaa fursad aad ku qaadato heerkan soo socda ee maareynta maareynta mashruuca kaas oo aan ka faaiidaysan kareynin badan oo ku saabsan mashaariicda ururrada maalinlaha ah si loo cusboonaysiiyo fulinta iyo fulinta mashruuca.
Horumarinta Suuqgeynta Suuqgeynta
Waxaad awood u yeelan doontaa in aad beegsatid ururada ugu sarreeya heerarka adduunka oo dhan oo ka shaqeeya qaybo kala duwan, tani waxay ku saabsantahay xisaabtaada waxay kordhin doontaa geesigaaga xirfadeed iyo inaad sharciyeysid maamulka mashruuca. Sidoo kale waxaad la xiriiri kartaa shakhsiyaadka ka mid ah koorsooyinka noocaas ah, waxaad si dhab ah uga qayb qaadan kartaa sheekooyinka, iyo ururinta kuwaas oo ka caawinaya inay macluumaad ku siiyaan aqoontaada.
Degree si aad u kasbato dakhli fiican
Sida iska cad, waxaa loola jeedaa in shahaadada PMP ay ku siin doonto fursad aad ku noqon karto agaasimaha mashruuca ee ka sarreeya shakhsiyaadka aan la hubin. Marka aad runtii ku qaadato shahaadada, waxaad bilaabi doontaa inaad aragto fuulaad dheeraad ah iyo lacag dheeraad ah.
Xirfadaha Maamulka Mashruuca ee Mashruuca
Tan waxaa si joogto ah loo siiyaa markaad la xiriirto shahaadada PMP. Agaasimaha mashruuca wuxuu u baahan yahay inuu xakameeyo cabbir la taaban karo iyo waxyaabo yaryar oo leh dhinacyo kala duwan oo mashruuc ah iyo kala-saarista shahaadada PMP ayaa loo sheegayaa in ay jirto horumar wax ku ool ah oo ka dhexeeya madax sare ee mashruuca.
Waxaan si fudud u fahamsanahay in ay la socdaan qiyaasta horumarka xogta, ganacsi kasta waxaa laga filayaa inuu wax ka qabato horumarinta jibbaarada. Waxaa jira dhibaatooyin kala duwan oo laga gaaray maareynta maaraynta IT-ga. Si loola macaamilo dhibaatooyinka noocaas ah, lafaha maaraynta maktabadda ee ITIL ama IT ayaa bilaabay inay qaataan meel aad u fiican ee ganacsiga. Warqadda ITIL waxaa lagu kala soocayaa aasaaska ITIL, Dhexdhexaadinta ITIL iyo heerka aqoonta ITIL.
Qodobka xiisaha shahaadada waa lacag. Haddii dhacdo in uu madax ka yahay macluumaadka ITIL, wuxuu dhab ahaantii noqon doonaa midka ugu badan ee ku lug leh urur sababtoo ah wuxuu si cad u qeexi karaa adeegga adeegga iyo in la sii wado maareynta xogta siyaabo kale oo aan la fahmi karin wax kale. Shahaadada waxay sidoo kale dib u cusbooneysiineysaa mid ka mid ah diiradda saaran sida isagoo ah khabiir, maamulaha ama xitaa iyo la taliyayaasha IT.
Munaasabadda lagu qalabeeyey shahaadada, waxaad dhab ahaantii muujineysaa heerka waajibaad ee soo socota ilaa inta laga gaadhayo shakhsi gaar ah si ay u sii joogaan kuwa kale ee qeybta IT. Tani waxay saamayn ku yeelataa inaad soo iibsato alaabta la ammaano. Dhamaadka dhammaadka shahaadada ITIL, maamulayaashu waxay u nugul yahiin inay si dheeraad ah wax u baraan, xirfad iyo waxtar badan oo ku saabsan inay u guuraan si ay u qiimeeyaan habka ku salaysan habdhaqanka ku salaysan khibradda IT. Iyada oo shahaadada ITIL, waxaad dhab ahaantii bilowdaa inaad la hadashid lahjad caadi ah oo ku jirta xirfadlayaashan xirfadlayaasha ah oo dhan agagaarka iyo halkan, waxaad bilowdid inaad geliso shabakad ka kooban nidaam dheeri ah iyo waxyaabo kale oo badan oo ka mid ah awoodda IT.
Maamulayaasha oo ay ku jiraan shahaadada IT-ga iyo macluumaadka ayaa dhab ahaantii sii wadi doona si ay u muuqdaan kuwo si aad ah ugu muhiimsan urur shakhsi ahaaneed maxaa yeelay waxay si cad u qiyaasaan dhammaan xogta fulinta. In la sameeyo sidan oo kale, iyadoo sidoo kale awood u leh inay hubiso wakhtiyada falcelinta iyo wargalinta gudaha iyo macaamiisha, waa caawimaadda ITIL oo awood u leh inay bixiso. Si aad macquul u noqotid, waa inaad sheegtaa in shahaadada ITIL ay tahay wax yar oo adag si loo furo shahaadada PMP. Ugu dambeyntii waa fadeexad aad u qaali ah sida habka ay u qaadato qorshe balaadhan oo ah hawlkar shaqo oo si dhamaystiran u diyaargaroobeysa dhammaadkaaga.
Si kastaba ha noqotee, dabcan, shahaadada qaadashada ayaa ah sabab loo dhiso oo waxay ku xiran tahay hadba sida aad u ilaalineyso xirfaddaada IT. Tani waxay ku xiran tahay sababaha uu qof waliba u go'aamiyay bartilmaameedyada iyo ujeedooyinka ujeedooyinka.
Sidoo kale waad soo bixi kartaa: -Fursadaha Shaqo ee Shahaadada ITIL
Waa in aad cilmi baaris ku sameysid oo aad ogaataa sida dhabta ah ee loo baahan yahay in ay awood u yeelato inaad ku qanciso bartilmaameedyada shaqada iyo horumarka hadda iyo mar kale. Ocarreer ayaa fursad u leh fursadda aad u baahantahay hal shahaado oo kuu keena inaad keento macluumaadka maareynta mashruuca ku habboon oo aad adigoon wax badan kala socon karin PMP.
Si kastaba ha noqotee, haddii ay dhacdo in aad u feejignaato fikrado isdabajooga ah oo ku saabsan maareynta Adeega ku salaysan IT waxaad dhab ahaantii aadi kartaa ITIL, halkii PMP. Labada shahaadadood ma haysan karaan madax madaxeed isku xirnaan madaama ay leeyihiin ujeedooyin gaar ah iyo shaqooyin kooras oo kala duwan. Waxay ku tiirsan tahay sida xirfadle IT ah iyo qof ahaanba, si aad u degto go'aanka waxbarashada.
Waa maxay ITIL? Maxay yihiin faa'iidooyinka shahaadada ITIL?
Habka ugu wax ku oolka ah ee lagu heli karo Shahaadadda PMP ee 2018 - Qoraalka Daraasadda, Talooyinka iyo Imtixaanka PMP®